सन् २०२० तपाईंको कस्तो रह्यो ? मेरो त यस्तो भयो | Everest Times UK
कुशल श्रेष्ठको निर्देशनमा ‘छातिभित्र मुटु चल्छ मेरो’ म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक
आरोही निर्मल पुर्जासहित १० नेपालीको टोलीले बनायो केटू हिमाल चढेर कीर्तिमानी
कोरोना प्रभाव : बेलायतको अर्थतन्त्र नोभेम्बरमा २.६ प्रतिशत खुम्चियो
इन्डोनेसियामा शक्तिशाली भूकम्प, ६७ मृत्यु, सयौं व्यक्ति घाइते
बेलायतमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ८६ हजार नाघ्यो
लिम्बुवान नागरिक समाज यूकेको साधारणसभा शनिबार
सिएनएस यूकेले इंग्ल्यान्ड र वेल्सको जनगणनामा नेपालीको बृहत् सहभागी गराउन अभियान चलाउने
आदिवासी जनजाति साहित्यकार महासंघ नेपाल घोषणा, संयोजकमा राजन, बेलायतमा अमित [नामावलीसहित]
ओलीको कदम ‘राजनीतिक विद्रोह’ हो
पत्रकार महासंघ यूकेका अध्यक्ष भन्छन्- खुशी लिम्बुबाट जेल हाल्ने धम्की खेप्ने बेलायतमा न म पहिलो व्यक्ति हुँ न म अन्तिम नै
कोरोना भाइरसको महामारी थप फैलिँदै गएपछि जापानमा गैरआवासीय विदेशीलाई आउन फेरि निषेध
विद्यमान ऐन कानूनको बर्खिलाफ हुने गरी निर्णय भएमा ठूलो आँधीबेहरी आउँछ : प्रचण्ड
संखुवासभामा बोन्पो लामाहरुको संरक्षण गर्न अक्षय कोष स्थापना
पूर्वाग्रही भएर आफ्नोबारे समाचार लेखिएको भन्दै पत्रकार खपाङ्गीको आपत्ति
फोनिज यूकेले समसामयिक विषयमा भर्चुअल अन्तर्क्रिया गर्दै
तमु समाज यूकेले मनायो भर्चुअल माध्यमबाट ल्वोँ लोछार/लोसार
पृथ्वीजयन्तीमा माल्यार्पणदेखि राष्ट्रिय झण्डा प्रदर्शनीसम्म
कोरोना उत्पतिबारे अनुसन्धान गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनका विज्ञलाई चीनमा आमन्त्रण
नेपाली भूमि फिर्ता भएरै छाड्छ : प्रधानमन्त्री ओली
तमुधिं यूकेका पूर्वअध्यक्ष कमल गुरूङलाई मातृशोक
बेलायतद्वारा विश्वव्यापी खोपका लागि १ अर्ब डलर प्रदान गर्ने घोषणा
सन् २०२० तपाईंको कस्तो रह्यो ? मेरो त यस्तो भयो
सन् २०२० धेरै पीडादायक रह्यो । कोभिड १९ दशा र महादशा भई देखा पर्‍यो । कतिपयले ज्यान गुमाउन पर्‍यो, कतिपयले मृत्युको मुखबाट उन्मुक्ति पाए । कतिपयलाई सातो लिएर छोड्यो । दुःखको साथ भन्नैपर्छ मैले नजिकका आफन्तहरू गुमाएँ ।
आर्थिक मामिला धेरै पीडादायी भएको पाइयो । हामी बस्ने मुलुक बेलायत सबैभन्दा अप्ठ्यारो अवस्थामा आइपुगेछ । कोरोनाले झ्याँकेको, झ्याँकै छ । जी ७ का सबैभन्दा विकसित वा आर्थिक शक्तिहरूमा सबैभन्दा बढी क्षति यसैले बेहोर्नुपर्‍यो । यही अप्ठ्यारो बेलामा यूरोपसँग महँगो पारपाचुके (Brexit) गर्नुपर्‍यो ।
उता विश्वको दादा अमेरिकीहरूको आगामी दिन सहज छैन भन्ने कुरा भनिरहनु परेन । भर्खरै मात्र आएको आँकडाहरूले २०२८ मा हालको दोस्रो वा उदाउँदो शक्ति चीनले उनको नम्बर एकको श्रीपेच खोस्ने निश्चितै भएपछि विक्षिप्त भएको छ बिचरा अमेरिका ।
मैले भन्ने गरेको छु…यो सभ्यताको लडाइँ हो। पछिल्लो ४५०-५०० वर्ष अमेरिकी र पश्चिमीहरूले चलाएको ह्वाइट सुपरमेसी, क्रिश्चियन-यहुदीको बोलवाला भएको वित्तीय प्रणाली, शिक्षा प्रणाली, उनका सबै खालका मान्यता र दर्शनमा समीक्षा गर्ने बेला आएको छ ।
उसो त भित्रभित्र मक्किएको थियो…कोरोनाको निहुँमा अब भत्किएको छ । अब नयाँ हिसाबकिताब गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ समीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा आइदियो ।
बुद्ध, ताओ, कम्फुसियस मा विश्‍वास राख्ने चिनियाँहरू खुलेर आधिकारिकरूपमा धर्म लेख्ने वा खुलाउने गर्दैनन् । यदि चिनियाँहरूले धर्म लेख्न थालेमा हालैको सबैभन्दा बढी क्रिश्चियनको संख्याभन्दा बुद्ध धर्मलम्बीहरूको संख्या बढी हुन आउँछ । एउटा कुरा गज्जबको छ… चिनियाँहरूलाई धर्म लेख्ने हो भने कम्युनिस्ट पार्टी सदस्य हुन पाउँदैनन् । यी विषय नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू वा व्यक्तिहरूले मनन गरेमा राम्रो हुनेछ कि !
मैले जोड्न खोजेको कुरा पछिल्लो चार/पाँच सय वर्षदेखिको एकछत्र वर्चस्व कायम गरी संसार हाँक्नेहरूको लागि धर्म नमान्ने….झनै कम्युनिस्टहरूले ओभरटेक गर्दा अमेरिकीहरू वा पुँजीवादीहरू विक्षिप्त भएका छन् । उदाहरणका लागि, चीन र भारत बीचमा अमेरिकी भूमिका, स्वतन्त्र तिब्बतको लागि गरिएको खर्च र प्रपन्च, उत्तरपश्चिमका अल्पसंख्यक मुस्लिममा उईगुरहरूलाई उक्साउने काम, हङकङ र चीनको तनावमा पसिरहने, ताइवान र चीनको टेन्सनमा खेल्ने, नेपालमा एमसीसी प्रकरण, दक्षिणीपुर्वी चीन सागरमा उनले गरेका गतिविधि… कोरिया, फिलिपिन्स, जापानलगायत धेरै देशहरूमा उनको सेना र उनीहरूको खर्चपर्च ! ऊ पहिले सोभियत संघ (रसिया)लाई र हालमा चीनलाई घेर्ने, निहुँ खोज्ने, लडाइँ गर्नेसम्मको वा सबै खालका शक्ति प्रयोग गर्न उद्यत छ ।
पछिल्लो केही वर्षदेखि ट्रेड वार र हालमा चिनियाँ दुई सयभन्दा बेसी कम्पनीहरूलाई अमेरिकाले डिलिस्टिङ्ग गरेको छ । रमाइलो कुरा त के भने धेरैजसो चिनियाँ कम्पनीहरू अमेरिकी PCAOB मा दर्ता भएकाहरू छन् । सार के हो भने ऊ कसैलाई मिल्न दिँदैन । केही न केही भूमिका खोज्छ, फट्याइँ गर्छ अनि हतियारको व्यापार गर्दछ । उनको साम्राज्य जुटाएर होइन फुटाएर, लडाएर, तहसनहस गरेरमात्र टिकेको छ । ऊ जसरी पनि चीनलाई पहिलो नम्बरमा उक्लन नदिन सबै प्रकारका हर्कत गर्दैछ ।
मेरो आशय सी जीनपिङले सबै ठीक गरिरहेका छन् भन्ने होइन । अब चाहिँ पावर फरक कोर्समा जाँदैछ । चीनलगायत दक्षिणीपूर्वी एशियाली राष्ट्रहरू इमरजिङ्ग पावर हो भने अमेरिकी वा पश्चिमीहरू फलिङ्ग !
झन्डै हाउजिङ्ग मार्केट टार्ट पल्टिन लागेको बेला चान्सलर सुनकको Stamp Duty Holiday को incentive package ल्याए । बल्ल धरासायी हुन थालेको मार्केट बौराउन थाल्यो । केही सकारात्मक सन्देश दिन सक्यो । कतिलाई पहिलोपटक Property Ladder मा चढ्न मद्दत गर्‍यो । त्यसैगरी दोस्रो वा त्योभन्दा बेसी घर जोड्नेलाई पनि झन्डै आधा सहुलियत भयो । हाम्रा नेपालीहरुले सदुपयोग गरेको पाइयो । स्याबास् नेपाली हो ..मिहिनेत गर्दै… घर थप्दै जानुपर्छ ।
प्रोपर्टीका विभिन्न strategy (रणनीति) छन् । B2Lठीक छ । R2B सधैं ठीक हुने कार्यक्रम हो । मेरो HMO हरूमा ९० प्रतिशत ठीकै भयो । नचाहँदा नचाहँदै पनि Section 21 र Section8 को डन्ड उठाउनुपर्‍यो । Eviction Notice अलि बदमासी गर्ने वा खराब नियतको टेनेन्टहरूलाई अलि प्रोत्साहन गरेको पाइयो । यो तीन महिनाबाट ६ महिना क्रमश: बढाएर हालैमात्र १८ महिना पुर्‍यायो। घरबेटी हुन चाहनेले विचार पुर्‍याउनुहोला…. चिप्लिने ठाउँहरू छन् । बुद्धि नपुराएमा भाडा त गुमाउँदै जानुहुन्छ नै…जीवनभर त्यही घरमा ज्वाइँ पालेझैं गरी पाल्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न… ।
यो पुँजीवादी/सोसलिष्ट देशमा कतै कम्युनिस्ट देशको गरिब वा स्वघोषित अल्छीहरूलाई सहुलियत बढाउँदै लगेको छ। उता कम्युनिस्ट देश चीनमा अर्बपति बढ्दै जाने र पुँजीवादी बेलायतमा गरिब/अल्छीहरूले सहुलियत दिँदै जाने… अरे शब्दजाल भयो …क्यानाम डिस्टर्ब ! जहाँ पनि भोटको राजनीति यार.. ।
कोभिडको बेला दुई बेडको बङ्गलो किनेर चार/पाँच बेडरूमको बनाएर भर्खरै सरेँ । यो मेरो सातौं प्रोजेक्ट हो । भित्ता, छतबाहेक सबै चेन्ज गरेँ । निकै जानेको छु जस्तो लागेको थियो । तर जान्नुपर्ने अझै धेरै नै रहेछन् भन्ने अनुभूती भयो । डिस्काउन्टेड दाममा किनेर भ्यालु एड गर्ने तरिका छ…सायद अब भ्यालुएसन गर्ने हो भने झन्डै डबल हुन्छहोला । कसैलाई सहयोग पुग्दछ भने म प्राइभेटमा सियर गर्न सक्छु ।
सियर / स्टक मार्केट –
कृपया स्टकलाई ग्याम्लिङ्ग हो भनी नबुझीदिनुहोला । सतही कुरा नबुझीकन एउटा धारणा बनाइन्छ भने तपाईंको उन्नतिमा तगारो बन्न सक्दछ। विभिन्न खालका स्टकहरू छन् । रिक्स र रिवार्ड त्यही मुताबिक हुन्छ । स्टक त्यही हो तर कुन फेजमा छ बुझ्न जरुरी छ। हामीले गर्नुपर्छ र नलेजबेस क्षेत्रमा हामी घोलिनुपर्छ नत्र हामी पछि पर्छौं कि भन्ने मात्र हो ।
मेरो अनुभव सियर गर्ने अनुमति दिनुहोला ।
पछिल्लो एक दशकको अनुभवमा यो गज्जबको इलम लाग्यो । मेरो रोजाईका सियरहरू गज्जबले बढिदिए.. गज्जब भयो । तर Cryptos मा मेरो फुटिङ्ग गलत टाइममा पर्‍यो कि भन्छु म । मलाई घाटा लाग्यो । उदाहरणका लागि NIO मैले $12.86 को दरमा किनेँ । अगष्टको पहिलो साताको सियर नोभेम्बर अन्ततिर $55 वरिपरि पुग्यो । बीचमा सानो खटनपटन भई $39 तिर झरेको थियो । हालमा केही उकासिएर $48.74 पुग्यो । यो झन्डै 400% बढेको छ।
Tesla सँग मेरो साह्रै प्रेम छ । सन् २०१७-१८ तिर किनेको हुनाले मलाई झन्डै १६०० प्रतिशत नाफा दियो। Tesla गत सालमात्र ६९६.१ प्रतिशत बढेको थियो । तर बीचबीचमा मैले लोभले वा डराएर बेच्ने र किन्ने गरेँ । ठीकबेठीक आफूले होइन रिजल्टले भन्दोरहेछ… राम्रो पैसा बनाउन पाइयो । अन्य…
लेखको आशय यस्तो होइन कि लगानी गर्दैमा नाफा भइहाल्छ वा म फेरि पनि सक्दछु भनी ग्यारेन्टी … सबै गुम्न पनि सक्दछ । म फाइनान्सीयल एड्भाइजर नभएकोले मैले यस्तो गर्नु वा नगर्नु भन्न मिल्दैन । न त उनीहरूले मलाई कमिशन नै दिन्छन्…मेरो लेख नितान्त इन्टरटेमन्ट प्रोपोज वा केही एजुकेसनल प्रोपोजकने हो । गर्दा हुँदोरहेछ भन्ने वा इनकरेजिङ्गको लागि हो ।
(New Year Resolition) मौकामा म कस्तो रहेछु भनी मेरो विश्लेषण गरेको छु…. सुन्नुहोला……
म गल्ती गरिरहने, फेरि उठ्ने, लड्ने सिक्ने गरिरहने… झेउ नमान्ने कोसिस गरिरहने….भैरे टाइपको मान्छे रहेछु, एउटा रहर गरिरहने उदेकलाग्दो मान्छे हुँ जस्तो लाग्दछ । मन नलाग्ने काम जति गर्नु भने पनि नगर्दो रहेछु… फेरि आफूलाई मन परेको चाहिँ सत्रअठार घण्टा पनि खट्ने ।
अल्छी भनौं होइन… होइन भने हो जस्तो…
यस्तो अराजक मान्छे भनी भाटे कारबाहीस्वरूप मलाई बुढी (झुमा)ले बेलुकी खान दिन्नन् हजुर ! यो नयाँ वर्षमा पोल खुलाएँ… (हहह…) अन्य धेरै छन् यो छोटो लेखमा सम्भव भएन । मैले जानेको सियर गर्ने र अरूबाट पनि सिक्ने गरेको छु । छ/सातवटा समूहसँग आबद्ध छु । केही किताबहरू, अनलाइन (पैसा लाग्ने) र मेन्टरहरू मेरा ज्ञानका श्रोतहरू हुन् ।
तपाईंको यो साल फलोस्.. फुलोस्, घर नहुनेले घर किन्नुहोला, हुनेले थप्दै जानुहोला । बैंकमा पैसा राख्नुभन्दा गतिलो मान्छे खोजेर लगानी गर्नुहोला ।
जे जे व्यवसायमा लाग्नुभएको छ नाफा कमाउन शुभकामना ।
फरेक्सवालाहरूलाई शुभकामना ।
स्टकका साथीहरूलाई अझै पैसा बनाउन शुभकामना ।
बस् आजलाई यत्ति गरौं हुन्न र ?